Nhazi 3 Na 1 Onye Nri China Manufacturer
Nkọwa:Punching Press 3 Na 1 Onyinye nri,Onye na-enye Servo Strip,Straightener 3 Na 1 Feeder
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Inye Nri na Ngwunye Aka > Nhazi 3 Na 1 Onye Nri
NSOGBU NKE 3 N’IME EGO
Nhazi 3 Na 1 Ndị na - ahụ maka nri dị na oghere dị mkpụmkpụ ka emepụtara ka o wee gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana maka nhazi nke ihe ndị nwere ike dị elu - ọbụlagodi ogo dị larịị dị warara.
Mpempe akwụkwọ Mayflay 3 Na 1 Feeder Line dị mma maka ụdị ụgbọ ala ọfụma, imepụta akụrụngwa, kọmpụta na igwe eletriki, ngwaike na akụkụ igwe wdg.
Ọdịnihu nke nkwekọrịta 3 Na 1 Feeder Line
Akụrụngwa Mgbasa Ozi Servo adabara maka ịkwọ ụgbọala, nrụpụta ngwa ọrụ, kọmpụta na ngwa elektrọniks, ngwaike na akụkụ igwe wdg.
Nhazi 3 Na 1 Ahịrị 1 n Short Space Design na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị.
Nhazi 3 Na 1 Onye Nri maka imeghe eriri igwe na-emepụta ihe nchara.
Nke a bụ otu n'ime ndị ahịa anyị na Slovenia, ha na-arụpụta akụkụ compater etiti na Precision 3 In 1 Feeder Line .
Punching Press 3 Na 1 Onyinye nri Onye na-enye Servo Strip Straightener 3 Na 1 Feeder Punching Press 3 Na 1 Feeder Punching Press 3 na 1 Feeder Punching Press Feed Line Punching Press 3-In-1 Feeder Punch Press Machine